ज्यूँदै बच्चालाई अस्पतालद्धारा मृत घोषणा ! » Farakkon
ज्यूँदै बच्चालाई अस्पतालद्धारा मृत घोषणा !
शुक्रबार, भाद्र २७, २०७६ १३:३९
बाँके,भदौ २७ । सुत्केरी ब्यथा लागेपछि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना भएकी जाजरकोटकी कमला अधिकारीको शुक्रबार बिहानै करिब पाँच बजे शिशुलाई जन्म दिइन्। जन्मिएको केही समयमा अस्पतालले शिशुको मृत्यु भएको जानकारी कमलाका श्रीमान् मिलन अधिकारीलाई दियो।
अस्पतालको प्रसुतिकक्षमा कार्यरत कर्मचारीले शिशुको मृत्यु भएको भन्दै कपडामा पोको पार्दै पोलोथिनमा राखेर अन्तिम संस्कारका लागि थमाइदिए। शिशु जन्मिएपछि खुसी भएका श्रीमान् मिलन एकाएक मलिन अनुहार बनाउँदै अन्तिम संस्कार गर्ने तयारीमा लागे।
नवजात शिशुलाई भेरी अस्पताल प्रसुतिकक्षमा कार्यरत कर्मचारीको चरम लापरवाहीका कारण मृत घोषणा गरेपछि पीडितहरुले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। मिलनले भने, ‘यसअघिको हाम्रो बच्चा खेर गयो, सन्तानको नाममा पहिलो शिशुका रूपमा छोरी पाएका थियौँ, अस्पतालका कर्मचारीका कारण ज्युँदै बच्चालाई गाड्न लगाइयो।’ रासस